Ukuphela kwenkxaso yeWindows 7 Ndingenza ntoni? | Iindaba zeGajethi
Ukuphela kwenkxaso yeWindows 7 Ndingenza ntoni?
UIgnacio Sala | | Iikhompyuter, Windows
UMicrosoft uvalelisile Windows 7, enye yeenguqulelo ezidumileyo zeWindows kule minyaka idlulileyo, ngemvume yeWindows XP. Kwiiyure ezimbalwa, uMicrosoft uyekile ukunika naluphi na uhlobo lwenkxaso kubasebenzisi babucala Windows 7, Oko kukuthi, abasayi kuphinda bafumane uhlaziyo lwalo naluphi na uhlobo.
Ukuba sithathela ingqalelo ukuba Windows 7 ibifakwe kwikhompyuter nganye kwezine ekupheleni kuka-2019, ngokuqinisekileyo ezi ndaba zilusizi olunzima kwizigidi zabasebenzisi, inja ekwakufuneka yenzekile, njengoko kwenzekile ngeWindows XP. . Ngethamsanqa Yonke into ikhona isisombululo.
1 Isiphelo senkxaso sithetha ntoni Windows 7
1.1 Qué puedo hacer?
2 Ukuphucula ukuya Windows 10 simahla
2.1 Hlaziya esi sixhobo ngoku
2.2 Yenza imithombo yeendaba yokufaka
2.3 Kwaye ke malunga nelayisensi?
3 Hlaziya izixhobo zakho
4 Guqula inkqubo yokusebenza
Isiphelo senkxaso sithetha ntoni Windows 7
Abasebenzisi basekhaya beWindows 7 sele ikhona Abayi kufumana naluphi na uhlobo lohlaziyo kwakhonaKe ngoko, baya kubhencwa kwimingcipheko emitsha efumanekayo ukusukela ngoku. Kwakhona, ukuba kuye kwafunyanwa ibug entsha engakhange ifunyanwe okoko yakhululwa kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, ayinakulungiswa ngohlaziyo nokuba.
Nangona kunjalo, abasebenzisi beenguqulelo Ingcali okanye ishishini liya kuqhubeka nokufumana inkxaso kude kube ngu-2023, ngaphezulu kwexesha elaneleyo lokuba iinkampani zivuselele izixhobo zazo ezindala ngakumbi kwezi zangoku apho zinokubaleka khona Windows 10 ngaphandle kwengxaki zokusebenza.
Ubunyani, ngaphezulu kwe-50% yeekhompyuter enonxibelelwano lwe-intanethi esele inayo Windows 10 ifakiwe, inkqubo yokusebenza ethi ngaphandle kwazo zonke izibonelelo ezisinika yona, khange ibe nendlela elula phakathi kwabasebenzisi beWindows 7, abasebenzisi abangakwenzanga kwalula ukuba iMicrosoft yamkele ingxelo entsha yeWindows.
Njengoko benditshilo ekuqaleni kweli nqaku, kukho isisombululo kuwo onke amatyala, okanye ubuninzi babo. Ukuphela kwenkxaso yeWindows 7 nguMicrosoft, sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo kuxhomekeke kwiqela, izibonelelo kunye neemfuno zomntu ngamnye.
Ukuphucula ukuya Windows 10 simahla
Kuxhomekeka ekubeni indala kangakanani ikhompyuter yakho, kunokwenzeka ukuba ihambelane Windows 10 The Windows 10 isixhobo sokufaka siza kusazisa malunga nokuhambelana. Ukuba sithathela ingqalelo oko Windows 10 isebenza kakuhle kwikhompyuter yeWindows 7Ngaphandle kokuba ithubeleza kwikhompyuter yakho, awuyi kuba nalo naluphi na uhlobo lwengxaki.
Ngexesha lonyaka wokuqala we Windows 10 ubomi, IMicrosoft ivumele bonke abasebenzisi ngeWindows 7 kunye nelayisensi yeWindows 8.x ukuba baphucule simahla Ukuya kwiWindows 10. Nje ukuba unyaka udlule, kuye kwafuneka siphume, nangona amaxesha ngamaxesha, iwindow iya kuvulwa enokusinika ithuba lokuphinda sikwazi oko.
Ukuphela kwenkxaso, iMicrosoft iqale yanikwa amandla kwakhona ngokungapheliyo, amandla okuphucula ikhompyuter yakho Windows 7 ukuya Windows 10 simahla. Ewe kunjalo, into yokuqala kunye neyona iphambili kukwenza ikopi yogcino lwesiqulatho sayo yonke imixholo esiyigcinileyo kwikhompyuter yethu kwidrive yangaphandle, okoko Ukuba sifuna Windows 10 ukusebenza ngathi ngumtsalane ukusuka kusuku lokuqala, kufuneka sifomathile ikhompyuter.
Nje ukuba senze ukhuphelo, kufuneka Khuphela isixhobo sokuhlaziya iMicrosoft ubeka kwindawo yethu kwaye Landela la manyathelo sinika iinkcukacha apha ngezantsi:
Nje ukuba sikhuphele isixhobo sokuFakela isiXhobo seNdalo seMedia, siyasiqhuba kwikhompyuter yethu.
Isicelo siya kusibonisa iinketho ezimbini: Hlaziya le khompyuter ngoku / Yenza imithombo yeendaba yokufaka (i-USB flash drive, iDVD okanye ifayile ye-ISO) yenye iPC.
Hlaziya esi sixhobo ngoku. Olu khetho luya kusivumela ukuba sihlaziye izixhobo zethu ngokuthetha ngalo lonke ulwazi esilugcinileyo kwizixhobo.
Yenza imithombo yeendaba yokufaka. Ngale ndlela, singenza indawo yofakelo yokufaka Windows 10 ukusuka ekuqaleni nakweyiphi na ikhompyuter, ukhetho ekufuneka silukhethe ukucima yonke imixholo yekhompyuter yethu kwaye senze ufakelo olucocekileyo.
Hlaziya esi sixhobo ngoku
Ukuze uphucule ikhompyuter yethu Windows 10 ukusuka Windows 7, ikhompyuter yethu ifuna ubuncinci I-8 GB yendawo yasimahla yokukhuphela Windows 10 kwaye uqhubeke ukuyifaka. Nje ukuba siyikhuphele, iyakuthatha ixesha elininzi okanye elingaphantsi kuxhomekeke kwisantya sonxibelelwano, iwizard iya kusibuza ukuba ziphi iifayile esifuna ukuncokola kuzo.
Nje ukuba sibonise umendo okanye iindlela apho iifayile zibekwe khona, inkqubo yokufaka iya kuqala. Nje ukuba sigqibile, siya kuba nokufumana usetyenziso olufanayo esele silufakile kwikhompyuter yethu yeWindows 7. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba isifaki siyakukhuphela ingxelo efanayo esiyifakileyo (Ama-32 okanye ama-64 amasuntswana) ke kuyacetyiswa ukuba kwenziwe ufakelo olucocekileyo ulibale ngohlobo lwama-32-bit.
Yenza imithombo yeendaba yokufaka
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khetha Windows 10 Inguqulelo ye-64-bit yokukhuphela, ukuze usebenzise ngokupheleleyo izixhobo zethu, ngakumbi ukuba ine-4 GB ye-RAM.
Inkqubo yokwenza Windows 10 indawo yokufaka ikwafuna indawo yasimahla kwihard drive yethu, ngakumbi i-8 GB. Nje ukuba ifayile yokufaka ikhutshelwe, iwizard iyakuyivula kwi-drive esiyikhethele yona yenza ufakelo olulandelayo ukususela ekuqaleni.
Nje ukuba senze imithombo yeendaba yokufaka, kufuneka siyicime ikhompyuter yethu kwaye tshintsha amaxabiso ebhuthi kwiqela lethu nge-BIOS ukuze iqale ngeyunithi esifuna ukuyisebenzisa.
Kwaye ke malunga nelayisensi?
Ukuba sihlaziya ikhompyuter yethu ukusuka Windows 7 ukuya Windows 10, inguqulelo entsha yeWindows iya kuyamkela ilayisensi esinayo kwiWindows 7 kwaye siyisebenzise ngokungathi yiWindows 10. Olu lwazi iya kugcinwa kwiiseva zikaMicrosoft, ke siya kuba nakho ukuyisebenzisa amaxesha amaninzi njengoko sifuna kwikhompyuter enye ukuba sinyanzelekile ukuba siphinde sisebenzise Windows 10 nangaliphi na ixesha.
Ukuba senza ufakelo olucocekileyo, kufuneka singene Windows 7 inombolo yelayisenisi esinayo xa inkqubo iyifuna. Nje ukuba ufake Windows 10, kufuneka siye ku Useto (isitshixo seWindows + i)> Uhlaziyo kunye nokhuseleko> Ukwenza kusebenze
Kwikholamu esekunene iya kuboniswa ukuba ipassword esiyisebenzisileyo iyasebenza. Ukuba ayisiyo iphepha-mvume elisemthethweni, ngokusengqiqweni ngekhe ubenakho ukusebenzisa eli thuba lasimahla silinikwa nguMicrosoft ukuphucula ukusuka Windows 7 ukuya Windows 10 simahla.
Hlaziya izixhobo zakho
Ukuba iqela lakho sele libabonile kwaye belifuna xa usebenzisa iWindows 7, awudingi ukuzikhathaza ngokujonga ukuba Windows 10 iyahambelana. Lixesha lokuba uhlaziye iqela lakho. Kuxhomekeka kwiimfuno zethu, sinokufumana iikhompyuter ezahlukeneyo zexabiso eliphantsi kunye neekhompyuter kwintengiso ukusuka malunga nama-euro angama-200, ngaphezulu kwezixhobo ezaneleyo ukuba iimfuno zethu kukubona iinethiwekhi zethu, jonga i-imeyile, bhala uxwebhu ...
Guqula inkqubo yokusebenza
Ngokucacileyo, olu lukhetho abasebenzisi abaluthathela ingqalelo kancinci, ngakumbi ukuba sithetha ngokhetho olusekwe kwiLinux. Nangona ujongano lomsebenzisi lufana kakhulu, kuxhomekeke kwifayile ye- distro ukuba sikhetha, siya kunyanzelwa khangela ezinye iindlela ezahlukeneyo kwizicelo esiqhele ukuzisebenzisa, ngakumbi ukuba azinayo inguqulelo yeLinux.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Ukuphela kwenkxaso yeWindows 7 Ndingenza ntoni?
Uphengululo lwentloko lweTronsmart Spunky Beat
Ezinye iindlela zasimahla kwiOfisi yeMicrosoft